रक्तदान गर्ने गर्नु भा छ ? रक्तदान गर्नुस् यस्ता नसाेचेका फाइदाहरु पाउनुहुनेछ । एकचाेटि पढाैँ - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it जाडो याम सकिएपनि गर्मी बढेको छैन । चिसो मौसममा हाड जोर्नी दुख्छ, खासगरी प्रौड उमेरका व्यक्तिलाई । युरिक एसिड कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ?
Up Next डण्डिफोर निचार्नुहुँदैन तरपनि निचार्छन्, फुटाउँछन् त्यसरी निचार्नु भनेको छालालाई अत्याचार गर्नु हो । के गर्ने त ? कसरी बच्ने डण्डिफोरबाट ?